A lomshado esemthethweni Maldives futhi ongokomfanekiso: inhlangano, ukubuyekezwa izindleko
I engapheli esiluhlaza, kancane iziqhingi poddernutoe amafu, uhlezi phezu emkhathizwe emkhathini azure kolwandle. Wayekhona izembatho ezimhlophe emi ogwini elinde amagalelo akhe eyodwa futhi igwebu lolwandle e kolwandle rose amacembe nge isixha yayo ... Kuyinto emoyeni, efana ifu, isembatho uyaphuma ayomhlangabeza, umoya eba izinwele zakhe ezinhle ... Ngalolusuku onesizotha wafakaza isakramente abathandi ezimbili kuphela kwelanga olunjengomlilo emadlambini, futhi akukho lutho olungeke ukuvimbela angenamkhawulo yabo njengoba esibhakabhakeni, injabulo ...
Romance kwi-Indian Ocean
Ziyanda imibhangqwana esemisha ukuthuthela kude eziwubala umshadisi, zikhetha ezinye adventure romantic kude umsindo ekuphileni kwansuku zonke. Namuhla, nezikhethekile ukunikela izindawo ezihlukahlukene kakhulu emhlabeni lapho lo mbhangqwana ungakwenza ngishade yi simo classical noma ekhethekile. A wedding in the Maldives kuthandwa kakhulu phakathi imibhangqwana esemisha romantic, ikakhulukazi phakathi diving abathanda.
Akhiwe emanzini afudumele kwe-Indian Ocean, le Maldives uma wadala ukuze sijabulele ukuphila futhi bayakhohlwa izinkinga zansuku zonke futhi okumatasa. Unforgettable indawo yemvelo, ocean engapheli, isimo sezulu ngokumangalisayo omnene, umusa nomoya wokungenisa izihambi yempi kwesokunxele isenzakalo esithakazelisayo ezokwenza kuyisiqalo esihle kakhulu sokuphila komkhaya. Wedding inhlangano kule ekhoneni ipharadesi ngokwethukela kuyanda phakathi osaziwayo futhi hhayi kuphela. Temnikova lomshado yamuva ku Maldives iye yabangela isithakazelo esikhulu yomphakathi kanye nesithakazelo wabhebhezela ukuvukela wave ezinkulungwane omakoti Russian kanye bazoba ngabelusi abafuna ukwenza usuku emisiwe umsuka umndeni ongenakulibaleka.
Angicabangi ukuthi lomshado Maldives - lena yinto ebiza kakhulu futhi ezingavamile. emcimbini nesizotha kubiza cishe u- $ 700, okuyinto efana ne ukunqoba ekhaya isilinganiso. Makube a kafushane olusemthethweni ingxenye ebhishi photographer professional, kodwa mangaki amahora elimangalisayo elinde ngothando nale ekhoneni ipharadesi! Yiqiniso, zonke izimfanelo okungeziwe, amasevisi kanye nezinye izinto uhambo lwakho kuyodingeka bakhokhe ngokwehlukile.
Isimo lomshado uzobe njengoba uvumele imicabango abagqugquzeli kanye honeymooners esikhwameni. Abantu bakholelwa izinto eziningana ingxenye esemthethweni, kusukela isabelomali ecasulayo ezibizayo. Kunoma ikuphi, izinzuzo ezingcono kakhulu kulesi sehlakalo kuyoba kwalibaleka futhi izithombe fabulously elihle izikhathi ezijabulisayo ekuphileni komkhaya wakho.
Wayetekula unyawo esihlabathini esifudumele, iphunga obucayi izimbali exotic kuhlobisa lwaleli ngokwesiko, Ukuvutha amadlingozi olwandle kanye nemisindo bewitching of folk. Kuyinto nomshado onjalo lolwandle e Maldives iyona elula kunazo ukuhlela, engabizi futhi bemthanda honeymooners. Izindleko umcimbi, okuyinto phakathi $ 700 kuhlanganisa elimibalabala ehlotshiswe izimbali lwaleli, a nguchwepheshe, iNgcweti yesimo Ngemikhosi amasevisi, elithi champagne ngoba umakoti nomkhwenyana. Ufuna ukwengeza umbala? Kungenzeka ukubamba emkhosini ekushoneni kwelanga. Ngaleso sikhathi, ingxenye kwesibhakabhaka ikhanyisa nge ikhiphe unqambothi lomculo ukukhanya tayaschego elangeni ocean, futhi izinhliziyo zichichima abasha kusuka imizwa yothando ngomunye nomunye.
Ufuna ukuba nomuzwa wokuthi amaphayona bemvelo isetshenzwe, ukushiya izimpawu zabo phezu esimhlophe lolwandle kukhona khona isiqhingi lingenamuntu, ukujabulela nomunye kude befuna izivakashi abilayo ukhiye - ke ukhululeke ukhethe exit emcimbini kwesinye seziqhingi we Maldives Islands. Abathandi izindawo ebabazekayo izithombe ekhumbulekayo, lo mkhosi izobiza mayelana 2000 zamadola. A wedding in the Maldives nge ukuhamba esiqhingini desert kuyinto iphakethe ephelele amasevisi, kuhlanganise service Shuttle kuyilabo ababesanda kushada, wonke amalungu mkhosi futhi imihlobiso endaweni yesenzo izithombe, nedili lomshado nabo ikhekhe kanye champagne, kanye ibhonasi nice - ukufinyelela spa imibhangqwana.
Wedding ngaphansi kwamanzi
lomshado Underwater ku Maldives, okwabangela inhlekelele kuqala $ 1,500, eziyojatshulelwa abathandi diving. Okuningi nzima kuwe ukucabanga ngezimfanelo emcimbini yasekuqaleni. Umakoti nomkhwenyana egqoke izinto zokubhukuda zemikhosi, afanele isikhathi, futhi ifakwe-scuba diving, hlabelela isifungo sokuba qotho umbuso Poseidon. Kulabo azifundisiwe ubuciko diving, kodwa nakanjani ufuna brakosochetatsya ngendlela ezinkulu kangako, linikeza isiqondiso professional, okwenza kungabi ingozi. Ngemva abangasoze balukhohlwa emcimbini photoshoot esanda owakwakhe alindele catamarans kanye izikebhe kanye lezitsha bendabuko ngewayini elikhazimulayo futhi ikhekhe.
Wedding ehhotela fancy
Kulabo abasanda kushada abangafuni alinge bagxuma amagagasi efudumele-Indian Ocean diving, kodwa iphupho ukubheka izilwane zasolwandle okuseduzane, kukhona ithuba omkhulu ukuchitha umkhosi lesingeke yokudlela kwamanzi Maldives. ihholo UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki yokudlela sise amamitha angu amahlanu ukujula kanye umbono panoramic ivumela umakoti nomkhwenyana futhi sibone ubuhle kwamanzi kwabakhileyo buthule olwandle. nomshado onjalo esikhathini Maldives iyona Izibuyekezo bencoma kakhulu. Labo wakwazi brakosochetatsya ngendlela, uphawu umuzwa ongavamile futhi kujabulise ahlula umphefumulo; solemnity okwamanje kanye umbukwane ulwandle ubuhle kuyogxilisa ngisho abahambi onokuqonda kunazo.
Okubalulekile ehhotela - egumbini kwamanzi for honeymooners. Ukuchitha ubusuku lwabo lomshado emphakathini ngezinto eziphila olwandle - umuzwa angavamile. Amafulethi bayindlala kakhulu. Ngenxa yale ncwadi egumbini lakho ngaphansi kwamanzi kufanele kube kusengaphambili, futhi izindleko iqala kusukela $ 2,000. Dinner ngesikhathi emajukujukwini olwandle igqoke izobiza okuyisilinganiso sabangu-150-250 amayunithi ezivamile. Lo mkhosi e yokudlela kwamanzi kungadla abasanda kushada kusuka $ 1,000, kuye simo wemikhosi.
Ufuna enye inguqulo engavamile futhi umxhwele i Suite umfelandawonye? Kulabo abafuna ukuzwa isivinini, uzizwa umoya izinwele zakho, ukunambitheka okunosawoti kolwandle spray sezindebeni othandekayo wakhe, futhi ukucabanga ocean olungenamkhawulo e yonke inkazimulo yayo, kukhona isithembiso esikhethekile - wedding emcimbini ku yacht elibizayo nge gumbi ethokomele. Ukuhlela emshadweni Maldives plan onjalo izobiza kusuka $ 5,000 kwabasanda kushada. Ibiza, kodwa umuzwa sebunyeni olwandle kumnandi, futhi isithombe umakoti nomkhwenyana nge izingalo eyeluliweyo ku esikebheni lalesi sikebhe kuyoba iparele -albhamu yomndeni. Marine speedster kwekilasi luzakwenziwa etholakalayo ngosuku. Uhlelo ngokwesiko kufaka Ukushushuluza ngosuku komkhathi ocean futhi emcimbini wedding ekushoneni kwelanga.
Njengomthetho, umbuzo abashadayo ku ukuthi kubiza malini umshado Maldives, ubhoko ezikhethekile travel ejensi ukumamatheka Ayindida futhi uphendule ukuthi isenzo intengo angavalelwa izidingo kanye amakhono umakoti nomkhwenyana. Ngaphezu iphakethe esezingeni ukuhlela umshado, ungakhetha noma iyiphi amaphuzu izinzuzo ibhonasi. Ukuze uthole imali eyengeziwe, ungasebenzisa imisebenzi wochwepheshe professional, abaculi enze-up, amankampani athengisa, labapheki, abaculi kanye abalobi. Konke lokhu ithimba lokudala uyakwazi futhi siqalise iphrojekthi lomshado esiyingqayizivele, izinkumbulo okuyikho okwenza umbhangqwana ube ne novalo uthathile ekhaya.
Ukubona umakoti nomkhwenyana
izambatho abasand 'ukutjhada kungaba bendabuko esiqhingini isitayela, noma nje uma ufisa. Okuqinile ayikho imikhawulo. Nokho, kutuswa ukuba ukhethe izingubo umakoti isitayela ngesiGreki, isikiwe futhi imodeli ivulekile yokukhanya izindwangu egeleza. Izingubo of umkhwenyana ukuba lihlale kahle ngangokunokwenzeka, kodwa ngokuvumelana nokugqoka abashadayo esizayo. Suit ozikhethela, kodwa nenhle ihembe okhanyayo wenza izindwangu zemvelo ibhangqwe ibhulukwe usike khulula e ithoni ezoba izinhlamvu ekahle isikhathi onesizotha. Ukuya ebhishi lomshado izicathulo kungenziwa dengwane, kodwa umhlobiso izimbali - Imfanelo esisemqoka the Maldives, okunikeza umbala isithombe esikhethekile abashadayo.
A wedding in the Maldives: esemthethweni futhi ongokomfanekiso
Bonke abathandi abafisa ukuxhumana izibopho Hymen ku Maldives, kubalulekile ukwazi iqiniso elibalulekile kakhulu. Wedding emcimbini, kungakhathaliseki ukuthi indawo, ziwumfuziselo. lomshado Esemthethweni ku Maldives ubhekwa kungenzeki, ngoba abantu bakulezi ziqhingi akazange ayisekele nendlela elihambisana Hague Sivumelwano, ukunika amandla bamazwe angaphandle ukushada ngaphandle kokugunyazwa. Futhi enxuseni eliseduzane Russian Federation kuphela eSri Lanka. Ngakho-ke, umshado esisemthethweni Kusafanele ulimi lwezandla ekhaya.
Ukuze bahlele umshado ongokomfanekiso ku Maldives abasanda kushada okudingeka kuphela passport ukuze uqinisekise ubuwena yabo. Ngokwe isitifiketi esikhishwe yi-ukuphela emcimbini, lo mbhangqwana ukuthi nakanjani umphelelisi esidlekeni umkhaya, futhi bayokhonza isikhumbuzo esithinta inhliziyo sokuthi lo kukankosikazi imilingo.
Kumyk lomshado - iqoqo yamasiko nemikhuba
Iminyaka engu-10 ngomshado - idethi abalulekile
Indlela yokwenza siqu izipho zakho izandla lomshado: lakhetsiwe imibono ezithakazelisayo
Siyakuhalalisela Original futhi amahle wedding yokugubha usuku
Udumo nokuhlonishwa, noma engu-60 edlule somshado
Ugobile yomgogodla, izimbangela kanye zokwelapha
Izincwadi Kuhle ku nengane kwengqondo
Ukukhetha kumatilasi kwabesifazane abakhulelwe
Kanjani futhi yini ukugqoka nge jini ibhantshi?
Amaphethini beNdabuko engavamile zokulala crocheted
Gabbro-diabase - zokugeza itshe, ama-sauna, ukudweba. izici Nice Izibuyekezo
Dream Ukuhunyushwa: yini dream umhlaba
Amanoni amajikijolo akhula: lapho utshala amakhabe
Inthanethi zezinto - kuyini? Ukuthuthukiswa kwe-Inthanethi izinto eRussia